किन बच्चाहरू आफ्नो बुबालार्इ घृणा गर्छन्? :: PahiloPost
किन बच्चाहरू आफ्नो बुबालार्इ घृणा गर्छन्?
1st August 2018, 10:13 am | १६ साउन २०७५
आमा यो गर! आमा यो गर! आमा यो गर!
मैले मेरो छोरोलार्इ जुत्ता लगाइदिने काम बीचमै छोडिडिएँ। त्यो काम उसको आमालार्इ सुम्पिएँ। किनभने त्यो काममा म पोख्त थिइनँ। त्यसले मेरो छोरोलार्इ तनाव भइरहेको थियो।
दुर्भाग्यवश मेरी श्रीमती अर्को छोरोको हेरचाहमा व्यस्त थिइन। उ आफ्नो भाइलार्इ हेर्दै आमालार्इ पीडा भएको आभास दिलाउँदै थियो। उसले आमासँग आफू दुःखी भएको बताइरहेको थियो।
त्यो एक सामान्य दिन थियो।
साढे दुर्इ वर्षे मेरा जुम्ल्याह छोराहरूको आँखामा म एकदमै धेरै आक्रमक देखिन्थेँ। उनीहरूको लागि म अरूको खुसीका लागि आफ्नो ब्याग प्याक गर्दै बाहिरिने मान्छे थिएँ। त्यसैले उनीहरूको दैनिक कार्यमा सहयोग गर्ने मेरो कोसिसले उनीहरू आक्रोशित हुन्छन्। र, आफ्नी आमाको खोजीमा हिँड्छन्। यदि उनीहरूले आफ्नी आमा भेट्टाउँन सकेनन् भने उनीहरू 'कपबोर्ड' बीचको सानो खाली भागमा लुक्छन्, जहाँ म पस्न सक्दिनँ।
म हात बिसाउन मिल्ने कुर्सीमा राम्ररी अडिन सक्दिनँ। तर मेरा दुबै छोरा आफ्नी आमाको एक खुट्टामा सन्तुलित रूपमा अडिन सक्छन्। डुल्न सक्छन्।
साँचो भन्नु पर्दा म निराश हुने मान्छे होइन। युनिभर्सिटी अफ इष्ट लन्डनको डेभलपमेन्टल मनोचिकित्सक र च्यानल फोरको कार्यक्रम 'डी सिक्रेट लाइफ अफ फोर, फाइभ एण्ड सिक्स इयर्स वल्ड' का विज्ञ डा. साम वासका अनुसार मेरो छोराहरूको व्यवहार नै उनीहरुको समस्या हो। जो आफ्नो मांसपेशीहरुलार्इ लचिलो बनार्इ निश्क्रिय बच्चाबाट बोल्न हिँड्न सक्ने बन्दै थिए।
वास भन्छन् 'सुरुवातमा उनीहरू प्रायः आफ्नो मुखमा के राख्दछन् र कुन अभिभावकसँग उनीहरू अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ। किनभने उनीहरूले धेरै गर्ने कार्य मध्य यी दुर्इ मुख्य हुन्।'
मेरो परिवारको व्यक्तिगत मनोचिकित्सक मिरअम चाचामु भन्छन् 'यो एकदमै सामान्य हो। त्यसले तपार्इँको परिवारमा केही समस्या छ भन्ने दर्साउँदैन। शिशुहरूले धेरै पटक आफ्नी आमाको छनोट गर्दछन्। किनभने, आफ्नी आमाको गर्भमा ९ महिना रहेका उनीहरू पछि पनि आमासँग धेरै समय बिताउँछन्। उनीहरूले आमामा स्याहार र सुरक्षा महसुस गर्दछन्। उनीसँगै आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई छनोट गर्न सक्षम हुन्छन्।'
तर यसले एक बुबालार्इ सजिलो बनाउँदैन। जो आफूले अत्याधिक माया गर्ने व्यक्तिबाट बारम्बार अस्वीकृत हुने गर्दछ। चाचामुका अनुसार बच्चाहरू आफ्नी आमासँग मिल्दा र बिछोड हुँदा भावुक हुन्छन्। जसबाट उनीहरूको सम्बन्ध झनै घनिष्ठ हुने गर्दछ।
व्यक्तिगत रूपमा म आफूलार्इ अस्वीकार गरेको कुरा सहन सक्दछु। त्यस्तो पहिला पनि भइसकेको छ। मेरी सात वर्षकी छोरीले पनि त्यो उमेरमा त्यस्तै व्यवहार गर्थिन्। एक साँझ मेरी छोरी मेरो हेरचाहमा थिइन। उनले उसको लागि ल्याएको 'जाफ्फा केक' खाइनन्। म सँगै सोफामा बसेर टिभीमा 'इन डी नाइट गार्डेन अन डी' हेर्न मन गरिनन्। त्यसको साटो सुत्ने बेला नभएसम्म एउटा कुर्सीमुनि सानो आवाज निकाल्दै बसिन। तर, अहिले म उनको मनपर्ने व्यक्ति हुँ। अथवा उनी मलार्इ अहिले सहन सक्छिन्।
म भावनात्मक रूपमा मैले सहनु परेको दुःख बाँड्न चाहन्छु। मेरी श्रीमतीले उनीहरूबाट ब्रेक लिन सक्छिन्। मैले ब्रेक भन्नुको अर्थ, उनी शौचालय जाँदा दुर्इ बच्चाहरुलार्इ आफ्नो खुट्टामा घुमाउँदै नजानु हो।
उनीहरुलार्इ म एक्लैले बाहिर घुमाउन लैजानु एउटा काम लाग्ने उपाय हो। तर, हामी घर फर्किने बित्तिकै बच्चाहरू आफ्नी आमासँग चुम्बक जस्तै अङ्गालिन्छन्। प्रायः यस्तो भावनात्मक व्यवहार देख्दा उनीहरू वर्षौँसम्म छुट्टिएर बसेका हुन् जस्तो आभास हुन्छ।
उनीहरू आफ्ना अभिभावकका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुने पर्खँदै र आशा गर्दै-गर्दा के म जस्तै अरू बुबाहरू सँगसँगै यो प्रक्रिया छिटो गर्न चाहन्छन्?
डा वास भन्छन् 'हामी तपाईँलाई चाहँदैनौँ भन्ने बच्चाहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईँ त्यसबेला धेरै दुःखी र अप्ठ्यारो महसुस गर्नु हुन्छ। उनीहरूका बारेमा तपार्इँले त्यस्तो भन्दा उनीहरू के महसुस गर्छन् भनेर सोध्नुहोस्। यदि तपाईँले इमानदार भर्इ वा रिसाउँदै उनीहरूलाई भन्नुभएन भने उनीहरू कहिल्यै सिक्न सक्दैनन्।'
चाचामु भन्छन्, 'आमा र बुबा दुबै मिलेर बच्चामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। त्यसमा 'बच्चाहरुका अगाडि भावनात्मक रूपमा बुबाको प्रशंसा गर्ने र बच्चाको उपस्थितिमा बुबालार्इ कमजोर रुपामा प्रस्तुत नगर्ने 'कार्य पर्दछ।'
मैले यो कार्य अभ्यास गरिरहने बाचा गर्दैगर्दा वासले सम्भावित 'फ्रेडोडियन विश्लेषण'को उल्लेख गरे पश्चात् म एकैछिन अड्किएँ। के यो एक 'न्यासेन्ट ओडिपस कम्प्लेक्स' हुन सक्दछ? के केटाहरूले मलाई आफ्नी आमाको ममताको प्रतिद्दवन्दीको रूपमा हेर्दैछन् ? म आशा गर्छु, त्यस्तो नहोस्। त्यो कथाको अन्त्य 'ओडिपसको बुढो' मान्छेका लागि राम्रो थिएन। उनीसँग त्यसको सामना गर्न जुम्ल्याहा बच्चाहरू थिएनन्।
क्रिस विन्डले टेलिग्राफमा लेखेको आर्टिकलको सहयोग रञ्जिततले गरेको भावानुवाद्
किन बच्चाहरू आफ्नो बुबालार्इ घृणा गर्छन्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली टोली घोषणा, विमल र भरत परेनन्, को-को परे?